MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: 28 September 2008
UN calls for the release of Myanmar's political prisoners (AFP)
GENEVA (AFP) — The new UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay called for the release of Myanmar's political prisoners Thursday as she launcheda'justice and dignity' week for detainees around the world.
"We believe that there are still 2,000 political prisoners in Myanmar," said Pilaly in her first press conference since taking office.
"We are asking the authorities in Rangoon to free them," she added.
Last week, she welcomed the release of seven political prisoners there.
The High Commissioner also called the detention of Myanmar's pro-democracy leader Aung San Suu Kyi "completely illegal, even in respect of the country's law."
Pillay also highlighted the plight of detainees in other countries.
"The number of people around the world who are believed to be held in some form of detention that is unjust or inappropriate probably runs into the millions," said Pillay.
"Every day around the world, there are hundreds of new cases of men, women and children being placed in detention, when they shouldn't be, sometimes in atrocious conditions," she added.
The South African lawyer, who has served asajudge with the International Criminal Court and as Judge President of the International Criminal Tribunal for Rwanda, became UN High Commissioner for Human Rights in September.
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 3.10.080COMMENTS
Labels: OTHERS' NEWS, UN
A Chance to Fight Than Shwe (GAME)
“ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို လေးဂွဖြင့် ပစ်နိုင်ပြီ”
(မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃- အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၀၈)
စစ်အစိုးရ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို တိုက်ခိုက်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးမှာ လက်တကမ်းအကွာတွင်ရှိနေသည်။ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကွန်ပြူတာတလုံးသာ လိုအပ်သည်။ moemaka.com သို့ သွားရောက်ပြီး သန်းရွှေကို ဘယ်လိုဆော်ရမလဲ ဟု အမည်ပေးထားသော ကွန်ပျူတာဂိမ်းကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ကာတွန်းဆရာ ဘိရုမာက မိုးမခ ပရိသတ်များအတွက် မြန်မာဆန်ဆန် တီထွင်ပေးလိုက်သည့် တိုက်ခိုက်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
(Click the picture to play the Game)
နွားကျောင်းသားလေးက ဘယ်ညာ ပြေးလွှားနိုင်သည်။ ညာဘက်ထောင့်ရှိနံပတ်မှာ ပစ်မှတ်ကို ထိမှန်ခဲ့သည့် အရေအတွက် ဖြစ်သည်။ ပွဲစဉ်တခုပြီးဆုံးတိုင်း ရမှတ်များကို မှတ်သားထားသင့်သည်။ သို့မှသာ မိမိ၏ တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းအင် အတက်အကျကို သိရှိနိုင်သည်။
နွားကျောင်းသားလေးက မိုးပေါ်မှ ထီးဖြင့်ဆင်းလာသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကို လေးဂွဖြင့် ပစ်ခတ်သည့် ကစားနည်းဖြစ်သည်။ တချက်ချင်း ပစ်နိုင်သကဲ့သို့၊ စက်သေနတ်ကဲ့သို့လည်း အဆက်မပြတ် ပစ်ခတ်နိုင်သည်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး နှစ်ပတ်လည်ကာလတွင် ထွက်ပေါ်လာသော အဆိုပါကစားနည်း၏ နောက်ခံပုံရိပ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှုခင်း၊ သာသနာ့အလံနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းသံဃာများကို တွေ့ရသည်။
ယမန်နေ့က အဆိုပါဂိမ်းကို စမ်းသပ်ခွင့်ရသော မိုးမခ ၀က်ဘ်မာစတာက “မိုးမခပရိသတ်တွေ ဒီဂိမ်းကို ကြိုက်လိမ့်မယ်”ဟု ဟောကိန်းထုတ်လိုက်သည်။
(Source : www.moemaka.com)
သန်းရွှေကို ဘယ်လိုဆော်ရမလဲ (ဂိမ်း)
*** ဂိမ်းတည်ရှိရာ အင်တာနက် လိပ်စာ = http://moemaka.com/images/berumagame01.htm ***
(ပြည်တွင်းမှ ပြည်သူများအနေနှင့် Proxy Website (www.usabackdoor.us) ကို အသုံးပြု၍ ဆော့ကစားနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 2.10.080COMMENTS
Labels: GAMES, OTHERS' NEWS
ဖဒိုမန်းရှာ အတွက် ပန်းခွေ
စိတ်ကို အရှို့ ခံလိုက်ရတာဟာ
အဲဒီ့ မာယာရဲ့  အရင်းအမြစ်က ရှင်းသလို
အဲဒီ့ ကြံစည်မှုရဲ့  ခေါင်းစည်းကိုလည်း
ဒွိဟ ဖြစ်နေစရာ အကြောင်းမရှိ
မျက်နှာလွှဲလို့ မရတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄)မှာ
ယဉ်ကျေးမှုလို့ ထ,ထ အော်ချင်တဲ့ လောကကို
ဘယ်လိုမှ ယဉ်ကျေးပြလို့ မရတော့
အသိကို ထိုးခွဲခံခဲ့ရတဲ့ နေ့တွေ
မသိမှု ဘိုးတံနဲ့ ထိုးပြနေတဲ့ အဖြစ်တွေ ကြုံရဦးမယ်
ပျော်ရာမှာ နေတိုင်းလည်း မပျော်တော့ဘူး ။
တော်ရာမှာ နေတိုင်းလည်း မတော်တော့ဘူး ။
ပန်းသီးကို လှံစွပ်နဲ့ ထိုးစားချင်သူတွေ
နှုတ်ဆက်ခွဲခွာရခြင်း မဟုတ်တဲ့ အတွက်
သွေးရိုးသားရိုး မဟုတ်တဲ့ သေခြင်းတရားကို
ဒါပေမဲ့, ကျုပ်တို့ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်
ဒီမိုကရက်တစ်ရဲ့  လက်ရုံးတစ်ဖက် ဖဒိုမန်းရှာ
နောက်တစ်ကြိမ် လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ် ခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးပါစေ ...
(Poem Photo - http://khinthumyint.blogspot.com/2008/02/blog-post_4835.html)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 30.9.080COMMENTS
Labels: OTHERS' POEMS
UN calls for the release of Myanmar's political pr...